अमेरिकी निशानामा ‘स्पेस वार’ कि चिनियाँ राजनीति र चिनियाँ अर्थतन्त्र ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
अमेरिकी निशानामा ‘स्पेस वार’ कि चिनियाँ राजनीति र चिनियाँ अर्थतन्त्र ?
काठमाडौं । अमेरिकाले आफूहरुले स्पेस फोर्स गठन गरिसकेको बताएको छ । तर स्पेस फोर्स भनेको के हो र के तयार गरेको छ भन्ने कुरा अमेरिकाले गुपचुप नै राखेको छ । अमेरिकाको अस्पष्ट भाषामा कसैले अन्तरिक्षमा पठाइने बिस्फोटक ड्रोन स्पेस फोर्सका रुपमा बुझेका छन् भने कतिपयले बिस्फोटक रकेट । अरु कसैले रोबोट मानव पनि हुनसक्ने बताएका छन् ।
तर जे होस्, अमेरिकाले रुस, चीन, इरान र उत्तर कोरियालाई अन्तरिक्षमा लड्न बोलाएर चुनौति दिने सोचेको हुन सक्छ । यसका पछाडि थुप्रै कुराले काम गरिरहेका छन् । पहिलो हो, पृथ्वीमा अमेरिकाको वर्चस्व सिद्धिएर गएको छ । सबैभन्दा बढी ऋणमा डुबेको देश अमेरिका हो । त्यसैले मानिसको ध्यान विकेन्द्रित गर्न उसलाई यो वा त्यो तमासा देखाउनु नै परेको छ । साथै, लडाइँ मच्चाएपछि हतियार पनि बिक्रि गर्न पाइने र पैसो कमाउन पनि पाइने भयो ।
दोस्रो कुरा, के गरेपछि, कहाँ लडाइँ गरेपछि चीन र रुसजस्ता देशहरुलाई कङ्गाल बनाउन सकिन्छ । सारा पृथ्वीमा चीनको लगानी बढेर गएको छ । चीनको अर्थतन्त्र कसरी ध्वस्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा अमेरिकी शासक र अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरु लागि परेका छन् ।
तेस्रो कुरा, चीन र चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग आमनेसामने र प्रत्यक्ष लडाइँ लडेर जित्न सकिने अवस्था छैन । यसका लागि ‘फल्स’ वा वनावटी वा नक्कली निशाना बनाएर चीनलाई फसाएर, लड्न लगाएर र पैसो खर्च गर्न लगाएर सिध्याउनु जरुरी छ । स्मरणीय छ, सोभियत समाजवादी रुसको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वैभवलाई ध्वस्त पारेर सिध्याउन चन्द्रमा पुग्ने होडबाजीमा तान्दै ‘हामी चन्द्रमामा पुग्यौं’ भनेर ठूलो रासी रुलाई खर्च गर्न लगायो । रुसी अन्तरिक्ष यात्री युरी गागरिन चन्द्रमामा पुगेर फर्किए तर अमेरिकाले वास्तवमा धेरै पछि मात्र चन्द्रमामा आफ्ना यानहरु पठाउन सफल भएको थियो ।
यसका राजनीतिक र आर्थिक असरहरु के के थिए त ? राजनीतिक रुपमा समाजवाद निर्माणको ध्यान ‘स्पेस वार’मा सारियो, समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया अबरुद्ध भयो, सिद्धियो । आर्थिक रुपमा लगानी ‘स्पेस वार’ मा गर्न थालेपछि देशमा आर्थिक अबनतिका कालहरु सुरुभए, देश विभक्त भयो । आखिर १५ वटा गणराज्यमा पूर्व समाजवादी रुस विभक्त भई चकनाचूर भयो ।
हालको अमेरिकी ‘स्पेस वार’ चिनियाँ अर्थतन्त्र सिध्याउन लक्षित छ ।